Quantum Wiricheya - Quantum 6000
Quantum mavhiripu tarisa kune rehab simba wiricheya brand iyo inopa yepakati vhiri vhezheni ye wiricheya vashandisi. Mucherechedzo pachawo une zvakawanda zvakasiyana maficha uye zvishongedzo zvekusarudza kubva, izvi zvinobvumidza mushandisi kuzviita gadzirisa sachigaro kusvikira zvazadzisa zvavanoda zvezuva nezuva.
Paunenge uchitenga pazvigaro izvi, iwe uchafanirwa kutanga neiyo base furemu, unogona kutora kubva kune toni yemavara akasiyana, kazhinji ungangowana rako raunofarira ruvara rwakapiwa. Kuti ukwanise kuwana chimwe cheizvi zvigaro unofanirwa kuzowana gwaro rinotenderwa kubva kuna chiremba wako kana anoshanda anozivikanwa weATP.
Vamwe vashandisi vanogona kukuwana kwakaoma kubata imwe nyore, nekuti yavo inishuwarenzi inogona kunge isinga funge kunge inodiwa.
Quantum Chairs uye Computer Models
Quantum zvigaro zvinogona kufungidzirwa sekombuta maererano nekutenga sarudzo. Unogona kuwana iyo yekutanga modhi, inoenderana nezvinodiwa zvako zvekutanga, asi inogona kusazadzisa zvizere zvaunoda kwenguva refu. Ndosaka iwe uchigona kuwedzera-pane boka rezvinhu zvakasiyana uye zvishandiso kuti chigaro chiwedzere kukodzera kune zvako zvezuva nezuva zvaunoda.
Chimwe chezvikamu zvinokwidziridzwa ndiyo mufaro unouya nechigaro. Iyo yekufara inogona kukwidziridzwa kuti ive hombe skrini. Yakawedzeredzwa runyanga vhoriyamu, uye beefier controller furemu kudzivirira kukuvara.